ဆီဒိုးနားရဲ့ အဖြစ်မှန် အသေးစိတ်ကို ဒီမှာဖတ်ကြည့်ကြပါ ~ မိုးညိုသား
ဆီဒိုးနားရဲ့ အဖြစ်မှန် အသေးစိတ်ကို ဒီမှာဖတ်ကြည့်ကြပါ
2:46 AM သတင်း No comments
ဆီဒိုးနားရဲ့ အဖြစ်မှန် အသေးစိတ်ကို ဒီမှာဖတ်ကြည့်ကြပါ (sharedanote via Bug Lab.)
Key card ကို ကောင်မလေးက ပေးတော့ ယူပြီး ကိုယ့်အခန်းရှိရာသို့ထွက်လာခဲ့တော့တယ်၊ အခန်းထဲကိုရောက်တော့ ကုတင်ပေါ်တွင် ခဏတာနားပြီး ထထိုင်မိလိုက်တယ်၊ အခန်းကိုတော့ မကြိုက်၊ အောက်သို့ ဆင်းလာခဲ့ပြီး ကောင်တာဆီသို့ခြေဦးတည့်ခဲ့လေတော့သည်။
အေး အေး ညီမကြေငြာမှတော့ Suite ဘဲ ယူတော့မယ်ကွယ်… ကျနော့်ကို ကောင်းတဲ့အခန်းပေးနော်
နာရီ နောက်ဘက်မှ SD Memory card ကို ကြည့်လိုက်တော့ 32 GB တဲ့.. အင်း မဖြစ်သေးပါဘူး… ဆိုပြီး Rechargeable Battery ကိုလည်း ထုတ်လိုက်ပီး USB charger ဘဲ တတ်လိုက်တော့တယ်.. အပိုပါတဲ့ 64 GB ရှိတဲ့ memory card ကို ထည့်လိုက်ပီး…record စလုပ်မိတယ်…
ကုတင်ရှိရာသို့တက်သွားပီး သီချင်း တပုဒ်ကို အသံတိုး အသံမြင့်ကာ သီဆိုပီး ခဏကြာမှ ပြန်ထထိုင်ကာ
နာရီလေးမှ Memory card ကိုထုတ်ပြီး computer နဲ့connect လုပ်ပြီး ကြည့်လိုက်တော့တယ်ကွယ်၊
တပတ်လောက်ကြာသောအခါ… ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တော့ လူကလည်းခရီးဒဏ်ကြောင့် ပင်ပန်းနေတော့ ဆီဒိုးနား အရိပ်သို့ ပြန်ရောက်လာခဲ့ပီ…
အခန်းထဲသို့ အရောက်တွင် နာရီလေးကတော့ နေရာမပျက် စောင့်ကြိုနေတော့ ပင်ပန်းမူတွေ ပျောက်ကုန်ပြီး…
laptop ကို ဖွင့် SD ကတ် ကို ထုတ်ယူကာ ထည့်ကြည့်တော့… Oh Shit လို့မိမိကိုယ်ကိုယ် ပြောမိတော့တယ်…
စိတ်ဝင်စားသွားကြပြီနဲ့တူပါတယ်.. အဲသလို ခိုးယူခဲ့တော့ မဟုတ်ပါဘူး… ကျနော် ခံစားကြည့်တာ ပါ.. ဟီး.ဟီး.. ဇာတ်လမ်းက အဲလိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး..
ကျနော် permission ကို ဖွင့်ထားလိုက်ပါပြီ
https://docs.google.com/file/d/0B5IWeiuuAQIkYjBIdGdsTU5vV28/edit?usp=sharing ကို ကြည့်နိုင် ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်၊
ကျနော် FB ကို နားထားတာ တပတ်လောက်ကြာတော့ blackmarket အလုပ်လေးတွေ FB က ညီအကုိုတွေနဲ့စုလုပ်မယ်ဆိုပြီး လာခဲ့ပါတယ်… FB ဘ၀ သိတဲအတိုင်း စကြ ပြောင်ကြ ရစ်ကြနဲ့အချင်းချင်းပေါ့။ ကျနော်ကတော့ ကျနော့် ယောက်ဖများ (အခင်ဆုံး လူများ) ကို စတတ်တဲ့ အကျင့်က ရှိနေတော့ SE နဲ့ရစ်တတ်ပါတယ်.. ယောက်ဖ Computer installation လုပ်တော့ SE do မယ်လုပ်တော့ သူကို့SE-DO-NA project prank လုပ်မယ် ဆိုပြီး Video ၁၀ နာရီကျော်ရှိတဲ့ video တစ်ခု (only black screen) တစ်ခုကို Google Doc မှာ တင်ပြီး သူ့ ကို Sedona hotel မှာရိုက်တဲ့ဟာဆုိုပြီး share ပေးခဲ့တယ်။
ကျနော် - ကြည့်ပီးရင် ပြောနော်…
(ကျနော်… သူ့ ကို permission ဖွင့်ချပေးလိုက်ပါတယ်)
ပထမရောက်လာတဲ့လူတွေကတော့ ကျနော် ခင်မင်တဲ့ လူတွေပါဘဲ… သူတို့ ကို ပေးပီး အသံကြားလား လို့မေးတဲ့အခါမေး.. အရုပ်မြင်လားလို့မေးတဲ့အခါမေးနဲ့SE ထိုးခဲ့ပါတယ်.. အသံမကြားဘူးလို့ဆုိုရင် ဘယ်ကြားမှာလဲ အတွဲတွေက ထုိုင်ပီး ပုံပြင် ပြောနေကြတာ မဟုတ်တာလို့ လည်း စနောက်ခဲ့ပါတယ်.. အရုပ်ကမမြင်ရဘူးလို့ ပြောလာခဲ့လျှင် အဲဒီနေ့ က မီးပျက်သွားလို ပါ လို့လျှောက်နောက်နေခဲ့ပါတယ်.. အဲဒါကြောင့် မဲမဲကြီးဖြစ်နေခဲ့တာလို့ …အဲဒီထဲမှာ အဆိုတော်တွေပါတယ် ခံစားကြည့်ပေါ့ လို့အဲလို SE ထိုးခဲ့ပါတယ်…ပီးတော့ သူတို့ နဲ့ ပေါင်းပီး ကျန်တဲ့ လူတွေကို လျှောက်နောက်ခဲ့ကြတာပေါ့ (group chat တောင်ဖွင့်လိုက်သေးတယ် ဟီး "တစ်နိုင်ငံလုံးကိုဆေးထိုးမယ်" ဆိုပြီး )
ကျနော်တို့အားလုံး SE ထုိုးတဲ့အခါ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသား ကျနော်တို့ လုပ်လို့ဘယ်လူတစ်ယောက်ကိုမှ အခွင့်အရေးယူ့ပီး နာမည်ပျက်အောင် လုပ်မယ်မဟုတ်… အလုပ်သမားဝန်ထမ်းတွေလည်း မနစ်နာစေရအောင် ကျနော်တုို့အားလုံး agreement ထားခဲ့ကြပါတယ်.. ပီးတော့ အရှိန်ရလာလျှင် တလွဲ တင်ပြဖေါ်ပြတတ်တဲ့ Journal တွေကို ဆော်ကြမယ်လို့ကျနော်တို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်.. ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ ဘာတွေကိုဘဲ ဖြစ်ဖြစ် confirm မရှိဘဲ ဖေါ်ပြတတ်တဲ့ဟာကတော့ Media သမားများပါ… ငွေရဖုို့ အတွက်ဘဲ ဘာတွေဖြစ်ဖြစ် အတင်းအဖျင်းများကို ဖေါ်ပြတတ်ကြတော့ ကျနော်တို့အဲဒီအချိန်ထိရောက်အောင် SE ထိုးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်.. ဒါမှ အဲလူတွေဟာ ဘာလဲ ဘယ်လဲ ဆိုတာ ကို ချပြမယ်လို့လုပ်ခဲ့ပါကြပါတယ်၊
ကျနော်လည်း သူငယ်ချင်းများ comment မှ မေးလျှင် အတည်ပေါက်နဲ့SE ထုိုးထားခဲ့ပါတယ်… အဲဒီထုိုးထားတဲ့ comment ကို တောင် မချန် သတင်းတွေမှာ လျှောက်ပွနေတော့ ကျနော်တို့ မှာ အူလှိ့မ်ပါရောဂျာ… ကျနော်က နောက်တာပါ..ကျနော်တို့နောက်တာ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံး ယားစိ ယားစိ ဖြစ်သွားတော့ ကျနော်တို့ မှာ ထပ်ဆင့် အူလှိ့မ်ရပါလေရော…
ကျနော်တင်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နာရီစာ Video ဟာ 51 MB ဘဲဖြစ်ပါတယ်… အခုလောက်ဆို ဒေါင်းကြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ အကြောင်းစုံ သိပီး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်…
ဒါပေမယ့် နိုင်ငံရေးသမားများကတော့ ဒီ ဆီဒိုးနားဟာ အစုိုးရ မျက်နာပြောင်တိုက် လမ်းကြောင်းလွဲလို့တစ်မျိုး ပြောဆုို ပုတ်ခတ်ချတာကို တွေ့ ရတော့ သူတို့ ရဲ့စိတ်ဓါတ်မှန်တွေကို တွေ့ ရပြန်ပါတယ်… နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာ အစိုးရကို ပုတ်ခတ်ပြောဆိုမှ နိုင်ငံရေးသမား ဖြစ်မယ်လို့ထင်နေကြတာ မြန်မာနိုင်ငံက နိုင်ငံရေးသမားများပေလော
မြန်မာနိုင်ငံမှ တတ်ယောင်ကားများဟာလည်း Google Drive မှ private share တဲ့ဟာကို သူများ password နဲ့email ကို ခိုးပါတယ်လို့အော်တဲ့ အကောင်တွေကအော်။ ဘာအဆင့်မှ မရှိဘဲ သက်သေမရှိဘဲ အော်တတ်တဲ့ကောင်တွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တပုံကြီး ဖြစ်နေတာ FB မှ သက်သေပင်၊
နောက်ပိုင်း လူတိုင်းစိတ်ဝင်စားမူများကို အကျင့်ယုတ်နဲ့အခွင့်ကောင်းကို ချောင်းမြောင်းတတ်တဲ့ ကုလားများလည်း Rat တွေဖြန့်ကြတာကိုလည်း တွေ့ သလို
BHG နဲ့မြန်မာ Hackers များ နှင့် ကျနော့်နဲ့friend များက (ကြည့်ပီးပီ ကောင်းတယ် မိုက်တယ် လို့ပြောတဲ့သူများ) ဖြစ်သော လူများကို မှုန်းတီးသော မနာလိုသော လူတချို့ ကလည်း ဟက်တာပါလို့လူများကြောက်လန့် အောင် အချိန်ကုန်ခံပြီး ကျနော်တို့ ကို စွပ်ဆွဲပြောဆုိုမူများလည်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မစားရ အမဲ သဲနှင့် ပစ်တတ်ကြတာ FB ပေါ်သို့သူတို့အကျင့်ပါ ပါလာတတ်တာကို တွေ့ ရပါတယ်၊
ကျနော်တို့ ကတော့ အဲလို attention seeker များကိုတော့ ဂရုမစိုက်ခဲ့ပါ၊ ကျနော်တို့target ကုို ထိဖို့ ဘဲ စောင့်နေခဲ့ကြပါတယ်။
အဲလို လုပ်လိုက်မူကြောင့် ကျနော်တို့သင်ခန်းစာ ရတာကတော့ Media သမားများဟာ ကျနော့်တို့comment ကိုတောင် မချန် အတင်းများကို သတင်းလုပ်ပီး တင်ခဲ့ကြပါတယ်၊
ဟာသအနေနှင့် windows 8 3GB ဖိုင်ကို တင်ပေးခဲ့ကြပါတယ်… တချို့ ဆို လက်မည်းကြီး စသည့် junk ဖိုင်များကို ဖြင့်သာ လုပ်ခဲ့ကြပေသည်၊
အခုတော့ media သမားများနဲ့နိုင်ငံရေးသမားများ. လူ့ ကျီးကန်းများကို ဆော်ဖို့အချိန်အခါဖြစ်သောကြောင့် ကျနော်တို့အားလုံးပေါင်းပီး ဒီဖြေရှင်းချက်ကို ရေးချလိုက်တာပါ၊
~ Blink Hacker Group ~http://www.blinkhackergroup.org
Greetz to: All Myanmar Hackers & IT Guys :P
ဒီပို့စ်ကို မောင်(စွယ်စုံကျမ်း) ကနေပြန်ကူးလာတာပါ။။